Puntland oo ku adkaysanaysa go'aankeeda Shirka Garoowe | KEYDMEDIA ONLINE
Deni iyo Axmed Madoobe ayaa lagu eedeeyay inay caqabad ku yihiin heshiis laga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka.
GAROOWE, Puntland - Maamulka Puntland ayaa ku adkaysanaya go'aankiisa in Shirka Farmaajo ku baaqey in la isagu yimaado 15-ka bishan magaaladda Garoowe loo wareejiyo Muqdisho.
Sababaha ay Puntland u cuskatay diidmadda ayay ku sheegtay in ay tahay in la ballaariyo gogosha, madaama Hay’adda Dastuuriga ah ee DFS wakhtigoodu dhammaaday, Shirkuna u baahanyahay wakhti badan in la geliyo, Saamileyda Siyaasadda, Beesha Caalamka iyo dhammaan dhinacyada ay khuseysona ay halkaasi wada joogaan.
Jubbaland ayaa taageertay go'aanka Puntland, iyadoo soo jeedisay in Muqdisho lagu qabto, oo lagu casuumo dhamaan saamileyda, oo ay ku jiraan bulshadda rayidka iyo musharixiinta mucaaradka ee ku sugan Caasimadda.
Shirka oo ka dhiman 4 maalmood waqtigii loo mudeeyay in la qabto ayaa noqday isku tuur-tuur, oo Muqdisho iyo Garoowe u dhaxeeya, waxaana suurta-gal ah in Farmaajo uu bedelo mowqifkiisa oo ogolaado Caasimadda la lagu kulmo/
Musharixiinta waxay doonayaan in Farmaajo uu kasoo qeybgalo isagoo Musharax ah Shirka maadaama mudo-xileedkiisa sharciga ah u dhamaadey 8-dii bishan, islamarkaana uusan dalka ka ahayn hadda Madaxweyne xasaanad leh.
0 Comments Topics: deni puntland soomaaliya